Wikinomics: Kubatana kweMisa Kuchinja Sei Bhizinesi | Martech Zone
Muvhuro, March 12, 2007 Muvhuro, March 12, 2007 Douglas Karr
Mushure mekupa kwakashata kutsoropodza bhuku racho, ndinofunga zvakanaka chete kutumira iyi bvunzurudzo naDon Tapscott, munyori we Wikinomics.
Zvekare zvakare - ndinoda iwo musoro wenyaya. Zvinondifadza chaizvo uye ndinotenda zvese zvinotaurwa naDon ndezvechokwadi. Ndakanga ndangofinhwa nebhuku.
Bhizinesi raDon: Paradigm nyowani
Wikinomics: Batsira kunyora chitsauko chekupedzisira.
Izvo Zvakanakisa Zviwanikwa Zvekuwedzeredza Yako Corporate Mabloggi Maitiro